Why Frameworks Suck? - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Posted by Ei Maung on October 12, 2009 at 10:00pm
အခုချိန်မှာ MS-DOS ကို ရုံးသုံး Operating System တစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုဖို့ဆိုတာ စိတ်ကူးကြည့်လို့တောင် မရတော့သလို လိုလဲ မလိုအပ်တော့ပါဘူး... အဲ့ဒီ ၁၉၈၁ ခုနှစ်လောက်က စခဲ့တဲ့ MS-DOS အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ကနေ့ခေတ် Windows တွေရဲ့ အစဖြစ်တဲ့ Windows 3.x, Windows 95, စသဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်... ချက်ချင်းကြီး Windows 95 ဆိုပြီး ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး... MS-DOS ဆိုတဲ့ Command Line Operating System အပေါ် အခြေခံပြီးမှသာ ဖြစ်လာရတာပါ...
Windows တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ နည်းပညာ Layer တွေ အဆင့်ဆင့်ထပ်ပြီး တည်ဆောက်ထားရတာပါ... အဆင့်ဆင့် ဘယ်လောက် ထပ်ထားမှန်း ကျွန်တော်တို့ အတိအကျ မသိနိုင်ပါဘူး...
Linux OS တွေမှာလဲ အတူတူပါပဲ... Linux Kernel ပေါ်မှာ User Interface အတွက် X Window System က Run နေရပြီး၊ X Window System ပေါ်မှာမှ Gnome Desktop Environment လို DE တွေ ထပ် ထားရပါတယ်... အဲ့လို အဆင့်ဆင့် ထပ်ထားပြီး Debian Packaging System (apt) နဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တော့မှာ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ Ubuntu Linux ဆိုတာဖြစ်လာတာပါ... သူလဲ Layer တွေ အဆင့်ဆင့် ထပ်ထားတာပါပဲ...
Programming Language တွေမှာလဲ အတူတူပါပဲ... Assembly Language ကို အခြေခံပြီး C/C++ ဖြစ်လာသလို C/C++ ကို အခြေခံပြီး Java / C# စသဖြင့် ဖြစ်လာတာပါ... Java ဆိုတဲ့ Programming Language ရုတ်တရက် ပေါ်လာတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး... အဲ့ဒီလို အဆင့်ဆင့် အခြေခံခဲ့လို့လဲ ပြည့်စုံတဲ့ Java Programming Language ဆိုပြီး ဖြစ်လာတာပါ...
ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ ဘယ်ကတည်းက အစပြုခဲ့မှန်း အတိအကျ မသိပေမယ့် ၁၉၈၀ ကျော်မှာ Personal Computer ဆိုပြီး စတင်လိုက်ကတည်း ကွန်ပြူတာနည်းပညာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်လာလိုက်တာ အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း (၃၀)ပြည့်ဖို့ နီးလာပါပြီ... အဲ့ဒီ နှစ်တွေအတွင်းမှာ နည်းပညာတွေ တစ်ခုအပေါ်တစ်ခုဆင့်ပြီး ဘယ်လောက်တောင် ထပ်ထပ် ထားသလဲဆိုတာ မှန်းကြည့်လို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး...
လိုရင်းပြောရရင်တော့ ကနေ့ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ နည်းပညာ အားလုံးဟာ Layer အဆင့်ဆင့် ထပ်ပြီး တည်ဆောက်လာခဲ့တာဖြစ်သလို အဲ့ဒီလို အဆင့်ဆင့် တည်ဆောက်ခဲ့လို့လဲ ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်...
အဲ့ဒီ Layer အဆင့်ဆင့်ကို နားမလည်ပဲ လက်ရှိ နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုပဲ သုံးတက်တဲ့သူကို User လို့ခေါ်ပြီး Layer အဆင့်ဆင့်ကို နားလည်တဲ့သူကို Computer Technician (Scientist, Professional) လို့ ခေါ်တာလို့ မြင်မိပါတယ်...
Software Frameworks ဆိုတာကို အမျိုးမျိုး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလို့ ရပေမယ့်၊ အရိုးရှင်းဆုံး ပြောရရင်...
Frameworks ဆိုတာဟာ၊ Productive ဖြစ်ဖို့အတွက်၊ အစစအရာရာ လိုက်ရေးနေစရာမလိုအောင်၊ အသင့်ရေးထားပေးတဲ့၊ အသင့်သုံး Functions တွေ စုစည်းထားတဲ့၊ Library တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်...
Framework ဆိုတာဟာ Programming Language အပေါ်မှာ ထပ်အုပ်ထားတဲ့ Layer နောက်တစ်ထပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
အဲ့ဒါကို နားမလည်ပဲ Program ရေးနေသူတွေကို IDE User လို့ ခေါ်ချင်ပြီး Framework ဆိုတာဟာ Programming Language အပေါ်က Layer တစ်ထပ်မျှသာဖြစ်တယ်လို့ နားလည်ထားသူကို Programmer လို့ ခေါ်ချင်ပါတယ်...
Layer တစ်ထပ် ထပ်လိုက်တိုင်း ဟာကွက်တွေ ယိုပေါက်တွေတိုးလာပါတယ်... အဲ့ဒီအကြောင်း အသေးစိတ် ဒီနေရာမှာ မပြောနိုင်ပါဘူး... Joel Spolsky ရဲ့ Leaky Abstractions ဆိုတဲ့ Article ကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်...
ဥပမာ တစ်ခုအနေနဲ့ ASP.NET Framework မှာ ရှိနေတဲ့ Leak တစ်ခုကို ပြချင်ပါတယ်...
HTTP နဲ့ Web Technology အရ Web ဆိုတာဟာ Event Driven မဟုတ်ပါဘူး... ASP.NET က Web Development ကို Windows Application Development ကဲ့သို့ Event Driven သဖွယ် Develop လုပ်လို့ရအောင် လုပ်ဆောင်ထားပေးပါတယ်...
ဒီလို Event Driven ဖြစ်လာဖို့ နောက်ကွယ်ကနေ Dirty Work တွေ အများကြီးလုပ်ရပါတယ်... ဥပမာ Post Back အတွက် View States တွေကို HTML Hidden Box ထဲမှာ Encrypt လုပ်မှတ်ထားရပါတယ်...
အဲ့ဒီ Behind the Scene လုပ်သွားတဲ့ Dirty Work တွေကို Developer တွေအနေနဲ့ သိစရာမလိုပါဘူး... ASP Button Control တစ်ခုထည့်.. Double Click လေးလုပ်ပြီး Button1_Click Event ထဲမှာ Code လေးတွေ ရေးယုံပါပဲ...
သိစရာမလိုတော့ Developer တွေ မသိကြတော့ပါဘူး... (MITP မှာတောင် နောက်ကွယ်မှာ ဘာလုပ်သွားလဲ သိစရာမလိုဘူး ပြောတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ် :) အဲ့ဒီလို မသိကြတော့ ပြဿနာတွေ တက်တော့တာပါပဲ...
ASP page တစ်ခုထဲကို asp Text Box control နှစ်ခု နဲ့ Button control တစ်ခု ထည့်ပါ... Button ကို နှိပ်လိုက်ရင် ပထမ Text Box ထဲကစာကို ဒုတိယ Text Box ထဲကို ကူးထည့်အောင် ရေးပါ... ဘယ် ASP.NET Developer မဆို ရေးတက်ပါတယ်... ပြီတော့မှ Page_Load မှာ ပထမ Text Box ကို Clear လုပ်ပါ...
ပထမ Text Box ထဲကို စာရိုက်ထည့်ပြီး Button ကို နှိပ်ကြည့်ပါ...
Button ကို နှိပ်လိုက်ရင် ပထမ Text Box ထဲက စာကို ဒုတိယ Text Box ထဲကို ကူးထည့်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဘာမှ ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး.. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Event Driven စစ်စစ်မဟုတ်ပဲ Event Driven လို့ ထင်ရအောင် လုပ်ထားတာမို့လို့ပါ... HTTP protocol က နဂိုကတည်းက တစ်ကြိမ် Request လုပ်မှ တစ်ကြိမ် Respond လုပ်တဲ့ Stateless System ဖြစ်လို့ Button ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ Page ကို reload ပြန်လုပ်နေပါတယ်... ဒါကြောင့် Button နှိပ်တာနဲ့ မဆီမဆိုင် Page Load က အလုပ်ကိုပါ သွားလုပ်နေပါတယ်... ဒီလို ကိစ္စတွေအများကြီးပါ...
Web Technology ကို နားလည်ထားတဲ့ Programmer တွေနဲ့၊ .NET Framework က နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေလုပ်သွားလဲ ဆိုတာကို နားလည်ထားတဲ့သူတွေအတွက် ပြဿနာ မဟုတ်ပေမယ့် IDE User တွေအတွက်တော့ တစ်ကယ့်ကို ပြဿနာ အကြီးကြီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
ကွန်ပြူတာပညာရေး နှင့် Frameworks/IDE
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ Computer Science ကို စနစ်တစ်ကျ သင်ခဲ့ရတဲ့သူ သိပ်မရှိသလို သင်တန်းတွေကလည်း IDE User တွေကိုသာ မွေးထုပ်ပေးနေတဲ့အတွက် သုံးမရတဲ့ IDE User တွေ ပုံနေပါတယ်... သူတို့ကို ASP.NET နဲ့ Web site တစ်ခုရေးခိုင်းရင် ရေးနိုင်ပါတယ်... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Programming စစ်စစ်ကို မတက်ပေမယ့် Visual Studio ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာတော့ သူတို့ ကောင်းကောင်း သိပါတယ်... သူများတွေဆီမှာတော့ မသိပါဘူး... ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာတော့ Frameworks တွေနဲ့ IDE တွေက၊ သင်တန်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Programmer ဖြစ်လာရမယ့်သူတွေကို IDE User ဖြစ်ကုန်အောင် ဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်...
ကျွန်တော်က Frameworks တွေ မကောင်းဘူး မကောင်းဘူး ပြောနေတော့ တစ်ခြား အကြောင်းကြောင့် ထင်ကြပါတယ်... အမှန်တော့ ဒီကိစ္စက အဓိကပါ...
ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်က Programming သင်တန်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ သင်တန်းဆင်းစ IDE User တွေကို၊ Programmer စစ်စစ် ဖြစ်ချင်ရင် သုံးနေတဲ့ IDE တွေ Framework တွေကို အခုချက်ခြင်းပစ်ချပြီး Programming Language စစ်စစ်ကို လေ့လာကြဖို့ ဒီနေရာကနေ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်...
တစ်ခြား Framework တွေကို မကြိုက်ရတဲ့ အချက်တစ်ချို့ကတော့...
တစ်ခါတစ်ရံ ရိုးရှင်းတဲ့ ပြဿနာအတွက် Frameworks တွေရဲ့ Convention တွေ Structure တွေကို လိုက်နာရတဲ့အတွက် မလိုအပ်ပဲ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ပိုစေတယ်
တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်တိုင်ရေးလိုက်တာက Framework က Provide လုပ်တဲ့ Library ကို နားလည်အောင် လေ့လာရတာထက် ပိုမြန်တယ်
တစ်ခါတစ်ရံ Framework က Boundary လို ဖြစ်နေပြီး သူပေးသလောက်ပဲ လုပ်ရတဲ့အတွက် လွပ်လပ်မှုမရှိသလို ဖြစ်တက်တယ်... ASP.NET Web Site အတော်များများကို ကြည့်လိုက်ရင် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကွဲပြားမှုသိပ်မရှိပဲ Framework က ပေးထားတာတွေကိုသာ သုံးထားတာ များတာကို တွေ့ရပါတယ်
တစ်ခါတစ်ရံ မလိုအပ်ပဲ Library တွေ တစ်ပုံကြီး Loading လုပ်ရတဲ့အတွက် နှေးပါတယ်... ASP.NET ဆိုရင် compile အရင်လုပ်လို့ PHP, Python တို့လို Interpreted Language တွေထက် မြန်တယ်မြန်တယ်ပြောနေပြီး Run Time မှာ Library တွေ Component တွေ တစ်ပုံကြီး Load လုပ်ရတာတွေ၊ တစ်ချို့ Behind the Scene Process တစ်ချို့တွေကြောင့် လက်တွေ့မှာ အတော်လေး နှေးတာကို တွေ့ရပါတယ်...
အမှန်တော့ အဲ့ဒါတွေက Minor Reason တွေပါ... Major Reason ကတော့ တစ်ကယ် အရေးကြီးတဲ့ Programming Language နဲ့ Technology တွေကို သိစရာ မလိုတော့သယောင်ယောင် ဖြစ်အောင် လုပ်ထားလို့ပါ... Navigation နဲ့ Paging ပါတဲ့ Image Rotate Circle Effect ကို Flash နဲ့မှ လုပ်လို့ရတယ်ထင်တဲ့၊ အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ ASP.NET Developer တွေ တစ်ပုံကြီးပါ...
ကျွန်တော့်အမြင်မှာ နည်းပညာနဲ့ အသုံးပြုမယ့် Programming Language ကို ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးသား Programmer တွေအတွက်၊ Frameworks တွေဟာ အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... Productive ဖြစ်အောင် ကူညီပြီး .NET Framework ကပြောနေတဲ့ Rapid Development ကို ရမှာပါ... ဒါပေမယ့် IDE User တွေအတွက်တော့ Frameworks တွေဟာ သူတို့ကို IDE User ဖြစ်အောင် လုပ်နေတဲ့ အကြီးမားဆုံး ရန်သူတွေပါပဲ...
[ Ei Maung ] Views: 158
Tags: asp.net, framework, rant Like0members like this
Comment by Sky@Napster on October 22, 2009 at 11:33pm ကောင်းကွာ....ကိုယ့်ကိုကိုယ် IDE User ဖြစ်နေမှန်း ခုမှသိတော့တယ်...
ငွေထုပ်မှတ်လို့ ခါးပိုက်ပိုက်ထားတာ လက်စသတ်တော့ မြွေပွေးခါးပိုက်ပိုက်မိရက်သားဖြစ်နေတာကို.
ကိုအိမောင်၊ ကိုမြင့်ကျော်သူတို့ အားရင်ပေါ့ဗျာ...ကိုယ်ပိုင် framework လေးဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဆိုတာ postလေးတင်ရင် သိပ်ကောင်းဗျာ... လေ့လာချင်တဲ့လူတွေအတွက် ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထည်းကျသလိုဖြစ်မှာ အမှန်ပဲ.. Comment by Ei Maung on October 18, 2009 at 11:21am >> I will definitely use SilverLight if I don't want my application/games to be used byalot of users
Oh! You shouldn't said like that even if it's true... Just joking.... :P Comment by Myint Kyaw Thu on October 18, 2009 at 9:42am >> So you can transform your app to Silverlight which will run inside web browser.
No, thank you :) I will definitely use SilverLight if I don't want my application/games to be used byalot of users :P SilverLight is going to die soon and Flash will prevail!!! Comment by Mark on October 17, 2009 at 9:59pm >> But I don't have logic
no problem, not logic challanges, just language challenges, you can just convert to ruby codes
>> What are you waiting for bro? Please startatopic... :)
ok bro, :D
Mark Comment by Ei Maung on October 17, 2009 at 9:35pm @Mark
>> the roman converter "CCXCIV" to 294 with one line of python? :D
Good idea. But I don't have logic. You start first please. I will follow with Ruby version...
>> we can start giving challenge examples each others and compete it? how do u think?
What are you waiting for bro? Please startatopic... :) Comment by Mark on October 17, 2009 at 5:54pm :D Python & Ruby are like Ubuntu and Kubuntu, Its very hard to compete though.
but still interest to do it. how can we start?
Can i start with my latest find, the roman converter "CCXCIV" to 294 with one line of python? :D
we can start giving challenge examples each others and compete it? how do u think?
Mark Comment by Ei Maung on October 17, 2009 at 5:02pm @Mark
>> do we interest to start language wars in another thread? I am on python side btw :D
OK, let go ahead. I'm on Ruby side... :D Comment by Ei Maung on October 17, 2009 at 5:00pm @Ko Myint Kyaw Thu
.NET Framework version 3.0 and later contain WPF (Windows Presentation Foundation) which is build on DirectX. It will provide hardware acceleration for Transparency, Gradient and other UI features and use Direct3D to render UI.
It also offeranew markup language XAML. So you can transform your app to Silverlight which will run inside web browser.
You already familiar with DirectX, Direct3D and Flash. Right? You might love WPF... :) Comment by Myint Kyaw Thu on October 17, 2009 at 4:40pm >> very true, .net is too big, and lots of dependencies,
@Ko Mark, last time I update my flash, it's 10 sec and it's up and running before I know it! No wonder 90% of users has latest flash version! Comment by Myint Kyaw Thu on October 17, 2009 at 4:39pm Ko Ei Maung ရဲ့ဒီ post ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖတ်ပါတယ်။ ဖတ်ပြီးတိုင်း ဟုတ်လိုက်လေ ဆိုပြီး အရမ်းသဘောကျပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို Ko Ei Maung လိုဘဲ ကိုယ်တိုင် framework တွေရေးရတာ သဘောကျပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် framework တွေ library functions တွေ စုထားရင် နောက်ပိုင်း program ရေးရတာ အရမ်းသက်သာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့၊ program ရေးဖို့ hardcore programmer တယောက်ဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး။ IDE user အနေနဲ့လဲ အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ program မြောက်များစွာ ရေးနိုင်ပါတယ်။ super hardcore programmer ဖြစ်ပြီး ဘာမှရေရေရာရာ မရေးဘဲ၊ တို့လို့တန်းလန်းတွေ များနေရင် အလကားဘဲဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့်၊ ကိုယ်တိုင်တော့ framework တွေကို မုန်းတယ်၊ မသုံးဘူး။ Framework programmer တွေကိုတော့ လက်ခံပေးနိုင်တယ် (dotNet framework မသုံးဘူးဆိုရင်ပေါ့၊ သုံးရင်လဲ XP မှာပါတဲ့ version သုံးကြပါ။ ကိုယ့် program ကိုလူတိုင်းသုံးနိုင်အောင်ပေါ့ :P ) ‹ Previous
devillove replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျ10 hours agopeepaw replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျyesterdayNga_Pyort replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျyesterdayLIquid@crystal replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျFridaypyiphyomgmgsoe updated their profileNov 26pyiphyomgmgsoe leftacomment for thinnNov 26pyiphyomgmgsoe replied to pyiphyomgmgsoe's discussion Free SIP for Testing ! ! !Nov 26pyiphyomgmgsoe replied to Aung Myo Htet's discussion About CiscoNov 26Bijamon liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Nov 25Bijamon shared Chaw Chaw kg lay's discussion on Facebookမြန်မာ Data Traveller ဆိုက်လေးNov 25Bijamon shared Chaw Chaw kg lay's discussion on Facebookမြန်မာ Data Traveller ဆိုက်လေးNov 23Hsatpaing joined Shwe Thaik's groupMyanmar WebsitesNov 22 11